Iimali ezinkulu zedijithali ezininzi ngo-2020. Uluhlu oluphezulu lweemali zedijithali ngeefowuni zeemarike EyoMsintsi 2020 xabiso lentengo yazo zonke iirhafu zemali ezikhutshwe (ukukhishwa) kwiimarike zemali zedijithali.
Uluhlu lwemali yedijithali ngeefowuni zorhwebo EyoMsintsi 2020
Bitcoin (BTC) 203 130 344 849 $
Ethereum (ETH) 43 037 796 225 $
Tether (USDT) 15 249 334 661 $
XRP (XRP) 11 258 844 800 $
Bitcoin Cash (BCH) 4 308 282 508 $
Polkadot NEW (POLKADOTNEW) 4 184 551 389 $
Binance Coin (BNB) 3 921 377 386 $
ChainLink (LINK) 3 677 262 934 $
Crypto.com Coin (CRYPTOCOMCOIN) 3 344 815 973 $
Litecoin (LTC) 3 165 231 750 $
Esona sikhundla sikhulu yi-imali yedatha yinkonzo ye-ptptoratesxe.com yewebhusayithi ebonisa ii-imali yedatha eziphezulu ezikhutshiweyo, ixabiso lazo zonke iingqekembe ezikhutshiweyo.
Inkonzo ekwi-intanethi "yeyona imali yedatha inkulu" isebenzisa imithombo evulekileyo evela kwiitransekshini ze-imali yedatha kwaye ibonisa umyinge weyona imali yedatha inkulu ngexesha langempela.
I-imali yedatha enkulu ithathelwa ingqalelo kwiindleko zazo zonke iingqekembe ezenziwe yile imali yedatha. Kuyimfuneko ukwahlula ixabiso leengqekembe enye kwixabiso lazo zonke iingqekembe kunye nemali eyinkunzi.
Ngokungafaniyo "Imali enkulu yedijithali" inkonzo, ebonisa ixabiso lazo zonke iingqekembe zemali, Ininzi yemali yedijithali ebiza inkonzo ibonisa i-crypto ngexabiso eliphakamileyo lengqekembe enye.
Umyinge weyona mali inkulu ye-imali yedatha itshintsha kwi-intanethi, kuba urhwebo kwi-imali yedatha exchanges luyaqhubeka, kwaye i-imali yedatha rate iyatshintsha. Inani leengqekembe ezikhutshiweyo, umbandela nawo awuhlali njalo.
Sebenzisa inkonzo "enkulu ye-crypto" kwi-intanethi kunye nesimahla.
Uluhlu lwee-imali yedatha ezinkulu ze EyoMsintsi 2020
Uluhlu lwee-imali yedatha ezinkulu ze EyoMsintsi 2020 imelwe kukukhethwa kwee-cryptos ezili-10 ngendlela yokuhlengahlengisa ukusuka kwelona likhulu liye kwelincinci, kwi-odolo yongxowankulu.
Ubungakanani okanye ixabiso le-crypto linikezelwa kwiidola zokuthelekisa okulula.
Umyinge weyona mali inkulu ye-imali yedatha inikezelwa EyoMsintsi 2020. I-capitalisation ihlala ijongwa yinkonzo yethu.
Ndwendwela iwebhusayithi yethu kwaye usebenzise inkonzo yeyona nto ibalulekileyo kwi-imali yedatha EyoMsintsi 2020.
Imali enkulu yedijithali 2020
Eyona mali inkulu ye-imali yedatha ye 2020 yinkonzo yethu yasimahla ye-intanethi yewebhusayithi ebonisa ii-imali yedatha ezinkulu ze 2020.
Isampuli ye-cryptos enkulu iyeza 2020, kodwa sivavanya ngokweenkcukacha iinyanga ezi-3 zokugcina imali. Amanqanaba kunye nokukhutshelwa kwemali ye-crypto inokutshintsha yonke imihla, kwaye ke ngoko izinga lethu eliphezulu "Ininzi yemali yedijithali ebiza 2020" inokutshintsha yonke imihla.
I-Imali yedatha inexabiso eliphezulu lokukhupha.
I-Imali yedatha ngokukhutshelwa okukhulu - ukulinganisa kwethu ukuvavanya ixabiso lazo zonke iingqekembe zemali nganye. Ingqekembe yeyona nto iqhelekileyo ukubala. Kucacile ukuba ungabhatala kunye nenxalenye yeengqekembe.
Ke ngoko, ixabiso le-imali yedatha elona xabiso liphezulu lwazo zonke iingqekembe okanye umyinge weyona nto ibalulekileyo kwii-cryptocurrensets endaweni yoko kuxhomekeka.
Ukongeza kubungakanani bemali ye-imali yedatha, kufanelekile ukuqwalasela inani leentengiselwano kwezi ngqekembe kunye nenani labasebenzisi be-crypto enkulu.
Uluhlu lwee-imali yedatha ezinkulu.
Itheyibhile yeyona mali inkulu ye-imali yedatha - ibonisa ukubonakalisa kwethu ireyithingi ephezulu ye-crypto enkulu.
Kwitafile ye-crypto enkulu unokubona igama le-imali yedatha kunye nereyithi yokutshintshiselana kwabo kwiidola zaseMelika.
Xa unqakraza kwenye yezona imali yedatha zibalulekileyo kwitheyibhile, uya kuthatyathwa kwikhasi ngolwazi oluneenkcukacha malunga nomba kunye nendleko yazo zonke i-imali yedatha zale mali.
Itshati yeyona nto ibalaseleyo ye-imali yedatha.
Itshati enkulu ye-imali yedatha sesinye isixhobo simahla kwi-Intanethi esibonisa isikhundla esiphezulu kwii-imali yedatha ezinkulu.
Itshathi yeyona mali inkulu ye-imali yedatha ibonisa inqanaba le-10 yeyona mali ephezulu yokuphuma.